Ma waxaad tahay iibin ama milkiile ganacsi oo raadinaya macaamiil cusub si kor loogu qaado wareeggaaga? Waxaa jira hal xal oo keliya: rajada kuwa adag. Raadinta taleefannada ayaa la muujiyey inay tahay habka ugu waxtarka badan uguna kharashka badan, marka si wanaagsan loo qabto. Tababarkan Philippe Massol, waxaad ku xallin doontaa shuruudaha lagama maarmaanka u ah diyaarinta wanaagsan ee raadinta taleefanka. Waxaad ogaan doontaa sida loo abuuro feyl raadinta iyo sida loo maareeyo feylasha xiriirkaaga. Waxaad sidoo kale baran doontaa inaad dhisto hadalkaaga, mararka qaarkood ereyga saxda ah ...
Sii wad akhrinta maqaalka bogga asalka →
Raadinta telefoonka ee guuleysta Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Aasaaska maareynta mashruuca: Isgaarsiinta
horeKu kobci fikirka hal abuurka leh iyo hal abuurka su'aalaha